महिलाको सेक्स प्रतिको चाहाना कस्तो हुन्छ ?
Topic: महिलाको सेक्स प्रतिको चाहाना कस्तो हुन्छ ?
Author Topic: महिलाको सेक्स प्रतिको चाहाना कस्तो हुन्छ ? (Read 2707 times)
« on: May 02, 2015, 02:24:03 PM »
महिलाको सेक्स प्रतिको चाहाना यस्तो पो हुदोरहेछ!! (बढी उमेरका महिलाहरू)
सामान्यतया पुरुषहरू सेक्सका लागी निकै उत्सुक हुने गर्दछन भन्ने मानिन्छ
तर, हालै गरिएको एक नयाँ अनुसन्धानले भने केही फरक कुराको खुलासा गरेको छ । जस अनुसार पुरुषहरू लामो समय सम्म सम्बन्ध बनाइ राख्नमा खुसी महसूस गर्दछन भने महिलाहरू सेक्सलाइ नै पहिलो प्राथमिकता दिने गर्दछन ।
इन्डियाना विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूले गरेको यस अनुसन्धानमा के पाए भने महिलाहरूको तुलनामा पुरुषहरू अंकमाल गर्न र किस गर्न धेरै मन पराउँदछन । अर्को तर्फ महिलाहरू सेक्स प्रति ज्यादै उत्सुक रहने गर्दछन ।
यस अनुसन्धानी प्रमुख जूलिया हेइम्यानका अनुसार यी ताजा नतिजाहरूको कारण यो हो कि सम्बन्धको शुरूवाती १५ बर्षहरूमा महिलाहरू बच्चाहरूको पालन पोषणमा व्यस्त रहने कारणले गर्दा धेरै भावनात्मक हुन्छन । तर जब जब समय बित्दै जान्छ, त्यसपछि उनीहरूमाथिको दबाब कम हुन थाल्दछ । जूलियाका अनुसार यो पनि सम्भव छ कि समय बित्दै जाँदा महिलाहरूलाइ धेरै यौन सन्तुष्टि प्राप्त हुन थाल्दछ, किनभने बच्चाहरू ठुला भएसंगै उनीहरूको जीवन परिवर्तन हुन थाल्दछ ।
यो अध्ययन पांच देशहरूका एक हजार भन्दा धेरै दम्पतीहरूमाथि गरिएको थियो, जसको उमेर ४० देखि ७० बर्षको बिचको रहेको थियो ।